करिश्मा र ओलीबीच के कुरा भयो ? कोमल ओलीले गरिन् खुलासा – Sunaulo Nepal TV
करिश्मा र ओलीबीच के कुरा भयो ? कोमल ओलीले गरिन् खुलासा
काठमाडौ । केही दिन यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा रहेकी सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरले ओलीलाई भेटेकी छन् । एक दिन अघि अवश्य भेट्नेछु बा त्यसै बा भएका होइनन् भन्दै लेखेकी करिश्माले भेटेकी हुन् ।
करिश्मा संग चर्चित हास्य कलाकार जितु नेपाल र कोमल ओली पनि पुगेका थिए । करिश्माले सामाजिक सञ्जालमा मार्फत ओलीलाई भेटेको खुलाएकी हुन् । उनले बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। साथमा गायिका एवं एमाले सांसद कोमल वली पनि थिइन्। ​भेटमा सहभागी हास्य कलाकार जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’का अनुसार यो भेट भक्तपुरको बालकोटस्थित एमाले अध्यक्ष ओलीकै निवासमा भएको हो।
यो भेटमा के के कुरा भयो त ?
सांसद वलीले थोरै जानकारी दिएकी छन्। उनले ट्वीट मार्फत ओली र करिश्माबीच भएका केही कुराको संकेत गरेकी छन् । उनका अनुसार ‘अत्यन्तै खुला हृदयका साथ नेपालका बारेमा अनि नेपाली राजनीतिका बारेमा विश्लेषण भयो। असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।’
यस क्रममा सांसद वलीले आफ्ना अध्यक्ष ओलीको निकै प्रशंसासमेत गरेकी छन्। ‘हामीहरूको खाली दिमागमा उहाँको भनाइले अत्यन्तै राम्रो रुल गरिरहेको छ’, उनले भनेकी छन्, ‘यसरी नै अरू नेताहरू पनि खुला भइदिएको भए सायद नेपाल धेरै अगाडि बढ्थ्यो होला।’ सांसद वलीका अनुसार भेटका अवसरमा नायिका करिश्मा र हास्य कलाकार जितुले पनि ‘आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुरा’ राखेका थिए।
Next पहिलो पटक छोरा भेट्न पुगेका शाहरुख यस्तो कुरा सुनेर निकै चिन्तित भए